Ogaden News Agency (ONA) – Xog ogaal daaha ka qaaday in laga bilaabay diiwaan galinta Liyuu Booliska Wadamada Reer Galbeedka
Xog ogaal daaha ka qaaday in laga bilaabay diiwaan galinta Liyuu Booliska Wadamada Reer Galbeedka
Qoraa arimahan wax kala socda ayaa ku qoray shabakad ka mid ah kuwii ka ag-dhowaa gumaysiga Cabdi ilay-na horey u taageersanaa, hadase aad moodo in la’isku seegay hoos orodka gumaysiga iyo u adeega danihiisa, in qurba joogta uu ka qoranayo Cabdi ilay Liyuu booli uu yidhi waa sirdoon hawshooda.
Wuxuu sheegay qoraaga inuu Cabdi ilay ka qorayo qorbaha liyuu boolis isagoo yidhi; Liyuu booliska qurbaha laga qorayo ayaan loo eegaynin sida kuwa gudaha wadanka laga qoro oo kale, sida Da’dooda iyo awooda shaqsi (xoogga) ay leeyihiin, waayo kuwan looma baahna in ay ordaan, qori qaadaan oo dagaal galaan, kaliya waxa looga baahan yahay in ay soo sheegaan shaqsiyaadka siyaasada cabdi iley wax ka sheega, kuwa amaana, iyo mida ugu muhiimsan oo ah in ay sacabka aad u badiyaan kolkii ama hadiiba uu yimaado Cabdi iley, oo ah ninka qoraya sirdoonkan maldahan.
Qoraaga faaladaa ayaa xusay in dadkii ku hungoobay soo dhaweynta Cabdi ilay socdaalkiisii hore ee uga dabtagay Jigjiga iyagoo isleh abaalmarin ka hela inay hadda ka mid ahaayeen kuwii ku banaanbaxayay. Wuxuu sheegay qoraaga inay kooxdaasi ka gaabsadeen qaarna kuba mudaaharaadeen, iyaga oo u arkay in uu nabada khatar ku yahay Isla markaana uu san fulinin wax yaabihii uu shirarkii hore ka sheegay.
Qoraagan oy hubaal tahay inuu la socdo arimaha ka jira xafiisyada Jigjiga ayaa sheegay in Minneapolis lagu wado in laga furo xafiis ay liyuu boolisku leeyihiin kaas oo loo furayo siduu hadalka u dhigay odayaasha beel ka mid ah beelaha dega Deegaanka. Wuxuu intaa raaciyay aqoonyahan diiday in magaciisa la qoro inuu yidhi; wasaarada arimaha dibada oo ay safaaraduhu hoos tagaan ayaa u xilsaaran furista xafiisyada iyo kharashaadkooda wadamada kale. Isagoo ku tilmaamay sharci daro in shaqsi haysta dhalasho British ah ama USA una dhaartay wadanka uu dhalashada ka qaatay uu si hoose oogu shaqeeyo wadan kale oo uu u noqdo sirdoon.
Qoraagan ayaa daaha ka qaaday inay jiraan warar sheegaya in shaqsiyaadka hadda dadkooda lagu xidhay Ethiopia ay sabab u tahay iyadoo akhbaaro khaldan ka soo gudbiyeen Liyuu Booliska Qurbaha (sirdoonka cusub).
Qoraaga ayaa ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa; in Ciidanka cusub ee Liyuu booliska Qurbaha ama sirdoonka cusub ee DDS-ta oo lagu qarinayo magaca xisbiga ay ilaaliyaan sharuucda wadamada ay ku nool yihiin ayna xaq-dhawraan shacabka walaaladood ah ee ay kala fikir duwan yihiin, hadii ay arintaas dhici waydo waxaan dhawaan markhaati ka noqon doonaa maxkamado la soo taago shaqsiyaad war ay sheegeen oo aan raad laheyn dad loogu xidhay.
Waxaa kaloo uu qoraaga faaladaa kula dardaarmay Cabdi ilay isagoo yidhi; wadamadani (reer galbeedka) Waxaa hagaajiyey masuuliyiin toodii ee ha jabinin sharciyada ay dajisteen, hana isku dayin inaad sirdoon ka dhigato shaqsi dhalasho kale haysta oo caydh ama (Welfare) inuu ka qaato laga yaabo. Deegaanka aad sharcigiisii ku tumatay ee shacabku kaaga soo carareen ku ekoow. Sirdoonka cusubna sharciga reer galbeedka waa loo siman yahay oo nina kama sareeyo, yaan la idin galin danbi idinku koobnaan doona.
haa, ina ILEY nin waalan weeye, waxaa la dhahaa waalidu waa noocyo isaga waxa uu qabaa nooc aad u xun, waa wax ka suurtooba inuu gumaysiga ku maaweeliyo basaasiin ayaan ka samaynayaa qurbaha, waayo wadadii fashalku halkii ay ku dhamaanhaysey ayuu joogaa….
INA ILEY WAA DAMEER AAN CAQLI LAHAY DAMIIRNA LAHAY DIINA LAHAY WAAYO BARASHO NOOGUMA DHIMANA WAXA UU YAHAY SAWIRKII AMIN ARTS AYUU SOO KOOBAY WAXA UU AYAHAY WAXAN RAJAY NAYAA MAR DHOW IN ILAAHAY GACMAHA ONLF KU CADAABI DOONO IIN SHAA ALLAHU TACALA
GUUL IYO GOBONIMO VIVA ONLF